Milina fananganana horonan-tsary, milina Slitting & CTL - Linbay
Cable lovia Roll namorona Machine
Mamatsy milina vita amin'ny tariby vita amin'ny tariby
Perfiladora de Bandeja Portacable
Strut Channel Roll Mamatsy milina
Din Rail Roll Mamorona Mahchine
Tsaina anao koa anefa & Shelving
Milina fitehirizam-bokotra rakitra trano fitehirizam-bokatra
Dingana Tara horonan-taratasy forming milina
Boaty milina Beam roll milina
Rolling Shutter Slat Roll Forming Machine
Rolling Shutter Door Rail Roll Forming milina
Mesin milina vita amin'ny Octagonal
Milina famoronana varavarana / varavarankely varavarankely
Perfiladora de Marcos de Puertas
Firafitry ny vy
Metal Deck Roll Izaho Jehovah no manao Machine
B Deck Roll Mamorona milina
Conformadora de placa fácil
Conformadora para placa colaborante
C Purlin Roll Izaho Jehovah no manao Machine
Z Purlin Roll Izaho Jehovah no manao Machine
Sigma Purlin Rolling Machine milina
CZ Purlin Rolling Machine milina
CZS Purlin Roll Machine milina
Perfiladora de Polines Estrukturales
Stud sy ny horonam-boky Track forming milina
Milina matevina vita amin'ny maivana Gauge
Masinina Silo Rolling Machine
Milina famolavolana vita amin'ny tanimboaloboka
Scaffold plank roll machine milina
Mitaovana lozisialy vita amin'ny lozisaka vita amin'ny gorodona
Trapezoidal Roof Panel Roll Machine
Conformadora para Chapa T-101
Conformadora para Calamina TR4
Conformadora para Plancha PV4
Mamatotra lakolosy vita amin'ny bara vy
Perfiladora de Lamina Galvateja
Double Layer Panel horonan-taratasy forming milina
Ridge Cap horonan-taratasy forming milina
tatatra Roll namorona Machine
Perfiladora de Canalones
Mivadika milina fanoratana kapoaka Downspout
Perfiladora de Bajante para Canalón
Perfiladora de Canaletas Americanas
Perfiladeira de telha trapezio 40
Perfiladora de bajantes
Highway Guardrail Roll fiforonana Machine
Fantsom-baravarankely an-dàlamby mitambatra ho an'ny mpanamory arabola
Masinina U Post Roll Mamatsy milina
Masinina fijanonan'ny fiaramanidina farany
Wire Mesh Fefy Post Roll Forming Machine
Activities / fampirantiana
Ny mpanjifa / mpiara-miasa
Masinina fanaovan-tsolika mitavozavozo
Floor deck TR80 milina fananganana horonan-taratasy
CZ Purlin Roll Izaho Jehovah no manao Machine
C Mamatotra Famolavola milina famolavolana
Mamatotra milina famolavolana rakitra
Masinina famoronana milina Din Rial
Angle Roll Mamatsy milina
Milina famolavolana Dlr
Ahoana ny fomba fametrahana LINBAY MACHINERY mandritra ny COVID-19?
Maimaimpoana ny fametrahana milina fananganana horonan-taratasy mandritra ny COVID-19!
Amin'izany i LINBAY dia hanazava ny fomba fanaovantsika ny fametrahana ny milina fananganana horonan-taratasy.
Voalohany, manamboatra ny masinina amin'ny zavamaniry izahay, hanontany izahay hoe inona ny habeny hataonao vokatra voalohany, apetrakay amin'ny masonay ny habeny hamokarany ary hanitsy ny masonkarena marina rehetra alohan'ny fandefasana, noho izany dia tsy mila manova na inona na inona rehefa nahazo ity milina ity ianao.
Faharoa rehefa esorinay ny masinina hanaovana debug dia mandray horonantsary izahay mba hahafantaranareo ny mampifandray azy ireo. Masinina tsirairay dia manana ny horonantsary. Ao amin'ny horonantsary dia haseho ny fomba fampifandraisana ireo tariby sy fantsom-pohy, hametrahana ireo menaka, atambatra ireo rafitra ara-batana sns…
Ity misy ohatra iray amin'ity horonantsary ity: https://youtu.be/p4EdBkqgPVo
Fahatelo, rehefa mahazo ny fitaovana ianao dia hanana vondrona wahtsapp na wechat, ny injenierantsika (miteny anglisy sy rosiana izy) ary izaho (miteny anglisy sy Espaniôla aho) dia ao amin'ny vondrona hanohana anao amin'ny fisalasalana.
Fahefatra, mandefa boky ho anao amin'ny teny Anglisy na Espaniôla ianao mba hahafantaranao ny dikan'ny bokotra rehetra sy ny fomba hanombohana ny masinina.
Manana tranga iray izahay fa ny mpanjifako avy any Vietnam dia nahazo ny masininy tamin'ny 25 Novambra, ary nametraka izany tamin'ny marika tamin'ny alina, ary nanomboka namokatra tamin'ny 26 Novambra. Ary ankoatr'izay, nahavita fahombiazana maro tamin'ny fametrahana milina sarotra kokoa izahay. Tsy misy olana amin'ny fametrahana ny masininao. LINBAY dia manolotra kalitao tsara indrindra sy serivisy tsara indrindra ho an'ny mpanjifanay, indrindra amin'ity toe-javatra ity. Tsy mila miandry ianao mandra-pahatongan'ny COVID. Azonao atao ny mamokatra ny piraofilina eo noho eo miaraka amin'ny masininay.
Conformadora para Solera
Conformadora para Omega
Conformadora para Montante
Perfiladora para Cantonera
Perfiladora para Buña Perimetral
Perfiladora para Angulo de Ajuste
Perfiladora de escalera de cable
Machine Roll Fender Roll Mamorona
Perfiladora Para Lamina KR-18
2 rihana, No.23-26.27 Xinfengyuan Fangqian Street Liangxi Road Xinwu District, Wuxi, Sina
LINBAY- Exporta la máquina perfiladora de...
LINBAY- Export Upright Rack Roll Forming ...
LINBAY-Exporta Máquina Conformadora y Máq...
LINBAY-Export Roll Forming Machine and Sl...
LINBAY-Exportar la Máquina Perfiladora de...
Nanontany ny Pricelist
Fa ny fanontaniana momba ny vokatra na ny vidiny, Masìna ianao, avelao ny mailaka ho antsika Izy ary ho mifandray ao anatin'ny 24 ora.
© Copyright - 2010-2021 : Zo rehetra voatokana.
Alefaso ny hafatra ho antsika:
Soraty ny hafatrao eto ary alefaso any aminay